गौरीसँग सुहागरात मनाउन पाएका थिएनन् शाहरुखले, यी हिरोइननले भाँडिदिएकी थिइन्, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गौरीसँग सुहागरात मनाउन पाएका थिएनन् शाहरुखले, यी हिरोइननले भाँडिदिएकी थिइन्
मुम्बइ। शाहरुख खान शेरवानीमा र गौरी बेहुलीको जोडीमा सुहागरातको लागि फ्नो फ्ल्याटमा पुगिसकेका थिए । २४ वर्षअघि उनीहरुको एक साथमा यो पहिलो रात हुने वाला थियो । तर अचानक एक हिरोइनका कारण उनीहरुको पूरै सुहागरात भाँडियो । यी दुईले कैयौं वर्षको प्रेमपछि १९९१ मा विवाह गरेका थिए । भोलि शाहरुखले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदैछन् । यही मौकामा आउनुहोस् जानौं कसरी भाँडिएको थियो उनको सुहागरात ।
त्यो दिन शाहरुख र गौरीको विवाह भएको थियो । त्यतिबेला शाहरुख हेमा मालिनीको एक फिल्ममा काम गर्दै दिए । बिहेकै दिन हेमाले शाहरुखलाई फोन गरेर इच्छा भएमा शुटिङ स्थल आउन भनिन् किनकि उनी र धर्मेन्द्र पनि स्टुडियो जाँदै थिए । शाहरुखलाई लाग्यो कि यो गौरीको लागि एक सरप्राइज हुनेछ उनले धर्मेन्द्र र हेमा मालिनीको आशीर्वाद पाउनेछिन् । त्यसपछि शाहरुख गौरीलाई लिएर स्टुडियो पुगे तर त्यतिबेला धर्मेन्द्र र हेमा मालिनी स्टुडियो आएकै थिएनन् ।
स्टुडियोको उक कोठामा शाहरुख र गौरीले धर्मेन्द्र र हेमाको प्रतिक्षा गर्न थाले । समय बित्दै गयो तर धर्मेन्द्र र हेमा आएनन् बरु एक स्पटब्वायले खबर लिएर आए । स्पटब्वायले शाहरुखलाई बताए कि हेमाले आफूहरु छिट्टै आउने भन्दै फिल्मको केही सिन सुटिङ गर्न पठाएकी थिइन् । असिस्टेन्ट डाइरेक्टर स्टुडियोमै थिए । राती करिब ११ बजे शाहरुख सुटिङका लागि गए । शाहरुखलाई आशा थियो कि त्यतिबेलासम्म धर्मेन्द्र र हेमा आउनेछन् र गौरीले उनीहरुसँग भेट्न पाउनेछिन् ।
रातको २ बजेसम्म शाहरुखको सुटिङ चल्यो । धर्मेन्द्र र हेमा आएनन् । शाहरुख खान जब फर्केर आए त्यतिबेलासम्म भारी सारी लगाएर दिनभर व्यस्त गौरी कुर्सीमै निदाएकी थिइन् । मुश्ताक शेखले लेखेको शाहरुख खानको जीवनीमा यो घटनाको कुरा गर्दै शाहरुखले भनेका छन् ‘त्यो दिन मलाई आफैंलाई देखेर रुन मन लागिरहेको थियो । यो दिन बलिउडमा म र गौरीको लागि अपमानको दिन थियो । यो गौरीको सुहागरात थियो जो एक घटिया, लामखुट्टे भरिएको कोठामा कसैको प्रतिक्षा गर्दै बितेको थियो ।’